မနာလို မုန်းတီး ရန်မူ နေသူများကို ရိုးရိုးမေတ္တာပို့ဖြင့် မထိရောက်လျှင် ရေဖြင့်် မေတ္တာပို့နည်း… -
မနာလို မုန်းတီး ရန်မူ နေသူများကို ရိုးရိုးမေတ္တာပို့ဖြင့် မထိရောက်လျှင် ရေဖြင့်် မေတ္တာပို့နည်း…
အလုပ်လဲမများ လွယ်လဲကူသော ရေမေတ္တာပို့နည်းပါ…ကိုယ်ကတော့..ကျောက်ခဲလေးနဲ့ ပြုလုပ်ပါတယ်…လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်နော် …. ။
လက်တွေ့ နည်းကောင်းတစ်ခုပေးမည် … ။ အကယ်၍ စ်ိတ်အာရုံညွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးနေရုံသက်သက်ဖြင့် ထိုသူ၏ ရန်မူနေခြင်းကိစ္စ အမြန် ပြေအေးသွားမည် မထင်ရလျှင် ရေမေတ္တာပို့ယူပါ၊
နည်းမှာ မိမိအလိုရှိသူကို ရည်မှတ်၍ သန့်ရှင်းသော ရေဖန်ခွက် တစ်ခုတွင် ကျောက်ခဲကလေး တစ်ခုဖြစ်စေ၊ တုတ်ချောင်းကလေး တစ်ခုဖြစ်စေစိမ်ထားပါ … ။ သူ၏ စိတ်နှလုံး ရေကဲ့သို့ အေးချမ်းသွားပါစေ ဟူ၍ လှိုက်လှဲစွာ မေတ္တာပို့လွှတ်နေပါ။
“သူ့စိတ် ပူဆာနေခြင်း အေးချမ်းသွားဖို့ ငါရေစိမ်ထားလိုက်ပြီ” ဟူ၍ မိမိစိတ်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းထားနေပါ၊ ပူပန်သောကဝင်၍ လှုပ်ရှား နေ၍ မရပါ။ သူ့ကို ငါ ဒုက္ခမရောက်စေလိုပါ၊ ငါလည်း စိတ်ချမ်းသာ၊ သူလည်း စိတ်ချမ်းသာ နေမြဲတိုင်းဖြစ်စေရန် သူ့ကို ရေခွက်ထဲ ချစိမ်ထားလိုက်ပြီ။
ယုံကြည်စွာ သူ စိတ်အေးသွားပြီ၊ သူ စိတ်ကြည်လင်သွားပြီ၊ သူငါ့ကို ရန်မူချင်စိတ် ပျောက်လွင့် သွားပြီ”-ဟု မိမိစ်ိတ်က သိနေပါ။ တကယ် ချမ်းသာ စေလိုသော စိတ်ရင်း စေတနာ ထား၍ ပေးနေပါ။ထိုသူ၏ စိတ်သည် ထိုအချိန်ပိုင်းတွင် မူပြောင်း လာပုံ တွေ့ရမည်။
သူ၏စိတ်ထဲတွင် မိမိက ပို့လွှတ်ပေးနေသောစိတ်တန်ခိုးကြောင့် ပူဆာဆူပွက်နေခဲ့ပြီးသော သူ၏ဒေါသစိတ်များ တဖြည်းဖြည်း ပြေအေးသွားလိမ့်မည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မိမိအပေါ် သနားစိတ်ဝင်လာမည်။ ဆက်လက်၍ ချစ်ခင်စိတ် ပြောင်းဝင်လာလိမ့်မည်။
ချစ်ခင်စိတ်ရောက်ခဲ့လျှင် မိမိကို မြတ်နိုးဖွယ်ရာအဖြစ် ကြည်နူးဝမ်းသာ စိတ်ဝင်စားခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေတောင်းပန်လာလိမ့်မည်။ ထိုနောက် သူ ပြောမှား, ဆိုမှားရှိသမျှ ဝန်ချ အကယ်၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း မပြုသော်လည်း မိမိအပေါ် ဆက်လက် ၍ ရန်မူနေခြင်း ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။
မီးကို ရေနှင့် လုံလောက်အောင် ပက်ဖျန်းထားလိုက်သကဲ့သို့ ကိစ္စပြီး အေးငြိမ်းသွားလိမ့်မည်။တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူ အခြားသို့ ရှောင်ထွက်သွားပုံကို တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ ဤဖော်ပြပါတို့သည် လူ့လောက၌ တွေ့ကြုံလေ့ရှိခြင်း များတတ်သောကြောင့် ပြည့်စုံအောင် ညွှန်ကြားပေးရ၏
လုပ်ငန်းကိစ္စ တစ်ခုခု၌ တွေ့ကြုံရသော အဆင်မပြေမှု, နှောင့်ယှက်မှု အကြောင်းခံသော နှောင့်ယှက်သူကိုဖြစ်စေ၊ နေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေး စသောကိစ္စမျိုး၌ တွေ့ကြုံလာရသော နှောင့်ယှက်သူကိုဖြစ်စေ ဘယ်နေရာမဆို တွေ့ကြုံလေသမျှ ဤညွှန်ကြားချက်နည်းအတိုင်းသာ လိုက်နာကျင့်သုံးပါ၊ လုပ်ဆောင်ပါ။
မိမိ မေတ္တာစိတ်ဓာတ် ခိုင်မြဲသော တန်ခိုးကြောင့် အံ့သြဖွယ်ရာ ကြည်လင် အေးမြခြင်းအဖြစ်ကို တွေ့မြင်လာရမည်။ မေတ္တာစိတ် လက်ကိုင်ထားသူသည် နောက်ဆုံး၌အောင်နိုင်မှု ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားပါသည်။
အိမ်မှ စိတ်ကောက်ပြီးထွက်သွားသူကိုလည်း ဤနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ၊ ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ ရဟန်း စသော သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုိ့မည်သည်မေတ္တာတရားကို စိတ်နှလုံးသား၌ အမြဲ ကိန်းအောင်းနေစေရ၏
တစ်ခါတစ်ရံ၌ လောကဓံ တစ်စုံတစ်ခု ကြုံတွေ့ရလျှင် ငါသည် လူယုတ်မာမဟုတ်၊တရားနှင့် ပျော်မွေ့ နေသူတည်း၊ ဘာအကြောင်းဖြစ်စေ လူ့လောကတစ်ခွင်ကျင်လည်နေရခိုက်အခါမှာ တွေ့ကြုံရသော ပြဿနာဟူသမျှကို မေတ္တာစက်ဖြင့် ဖြေရှင်းသွားမည်၊ မေတ္တာတရားသာ လက်ကိုင်ထားသွားမည်ဟူ၍ ခိုင်မြဲစွာ နှလုံးပိုက်ထားရာ၏။
မေတ္တာကို အဖော်ပြု၍ မေတ္တာတရား ရင်ဝယ်ပိုက်ထားလျှင် စိတ်မချမ်းသာစရာ တွေ့ကြုံရသော်လည်း စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အမြင်မှန်ရလာပါမည်။ မကြာခင် မေတ္တာထားသူဘက်က သူ၏ဆန္ဒပြည့်ဝ၍ အောင်နိုင်သူအဖြစ် ရောက်သွားရမြဲသာတည်း။
အမြတ်တောင် ထွက်သွားကြရမြဲဖြစ်၏။တရားသဘော၏ ဤသို့ ဖြစ်တတ်ပုံကိုလည်းယုံကြည်မှု ထားနေရာ၏။ ခိုင်မြဲသော သဘာဝတည်း။ မေတ္တာတရား လက်ကိုင်မထားဘဲ မခံချင်စိတ်၊သည်းမခံနိုင်စိတ်၊ ဒေါသ, မာန စသော အခြားနည်းဆိုးလက်ကိုင်ထားလျှင် မှားသွားလေပြီဟူ၍သာ မှတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် မေတ္တာတရားကို လက်ကိုင်ထားခြင်းထက် ကောင်းသောအရာ မှန်သော အလုပ် လူ့လောကတစ်ခွင်မှာ ဘာမှမရှိပါဘူးဟု ဤဆောင်းပါးအစပိုင်း၌ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မေတ္တာတရား၏ ကောင်းကျိုးကား ဤမျှသာမကပါ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုပါ ကောင်းကျိုးပေး၏။
ဤဘဝ၊ နောင်ဘဝ ကြည်လင် ချမ်းမြေ့စွာသာကျင်လည် သွားနေရမည်သာတည်း၊ မကောင်းသောဘဝမျိုးသို့ ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သန့်ရှင်းသောကြည်လင်ဖွယ်ရာရှိသော ကောင်းမြတ်သော လူ့ဘုံ၊
နတ်ဘုံ သုဂတိဘဝတို့၌သာ ကျင်လည်သွား လာနေရမည်မှာအမှန်တည်း ဤသဘောသွား ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းယုံကြည်ထားရ၏။ ထို့ကြောင့် မေတ္တာတရားကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ လက်ကိုင်ထားနေကြပါဟူ၍ တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်သတည်း။ စိတ်ထားဖြောင့်တော့ အလုပ်ဖြောင့်၏။ အလုပ်ဖြောင့်တော့ အကျိုးဖြောင့်၏။
(တောင်တန်း သာသနာပြုဆရာတော် ရေမေတ္တာပွားနည်းမှ Mini Monk မျှဝေတင်ဆက်ပါသည်။ မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံး ကျင့်သုံးနိူင်ကြပါစေ)
Credit-ထပ်ဆင့် ပူဇော် မျှဝေအပ်ပါသည်ဘုရား
မနာလို မုနျးတီး ရနျမူ နသေူမြားကို ရိုးရိုးမတ်ေတာပို့ဖွငျ့ မထိရောကျလြှငျ ရဖွေငျ့ မတ်ေတာပို့နညျး…
အလုပျလဲမမြား လှယျလဲကူသော ရမေတ်ေတာပို့နညျးပါ…ကိုယျကတော့..ကြောကျခဲလေးနဲ့ ပွုလုပျပါတယျ…လုပျကွညျ့စခေငျြပါတယျနျေျာ …. ။
လကျတှေ့ နညျးကောငျးတဈခုပေးမညျ … ။ အကယျ၍ ဈိတျအာရုံညှတျပွီး မတ်ေတာပို့ပေးနရေုံသကျသကျဖွငျ့ ထိုသူ၏ ရနျမူနခွေငျးကိစ်စ အမွနျ ပွအေေးသှားမညျ မထငျရလြှငျ ရမေတ်ေတာပို့ယူပါ၊
နညျးမှာ မိမိအလိုရှိသူကို ရညျမှတျ၍ သနျ့ရှငျးသော ရဖေနျခှကျ တဈခုတှငျ ကြောကျခဲကလေး တဈခုဖွဈစေ၊ တုတျခြောငျးကလေး တဈခုဖွဈစစေိမျထားပါ … ။ သူ၏ စိတျနှလုံး ရကေဲ့သို့ အေးခမျြးသှားပါစေ ဟူ၍ လှိုကျလှဲစှာ မတ်ေတာပို့လှတျနပေါ။
“သူ့စိတျ ပူဆာနခွေငျး အေးခမျြးသှားဖို့ ငါရစေိမျထားလိုကျပွီ” ဟူ၍ မိမိစိတျကိုလညျး ရှငျးရှငျးထားနပေါ၊ ပူပနျသောကဝငျ၍ လှုပျရှား နေ၍ မရပါ။ သူ့ကို ငါ ဒုက်ခမရောကျစလေိုပါ၊ ငါလညျး စိတျခမျြးသာ၊ သူလညျး စိတျခမျြးသာ နမွေဲတိုငျးဖွဈစရေနျ သူ့ကို ရခှေကျထဲ ခစြိမျထားလိုကျပွီ။
ယုံကွညျစှာ သူ စိတျအေးသှားပွီ၊ သူ စိတျကွညျလငျသှားပွီ၊ သူငါ့ကို ရနျမူခငျြစိတျ ပြောကျလှငျ့ သှားပွီ”-ဟု မိမိဈိတျက သိနပေါ။ တကယျ ခမျြးသာ စလေိုသော စိတျရငျး စတေနာ ထား၍ ပေးနပေါ။ထိုသူ၏ စိတျသညျ ထိုအခြိနျပိုငျးတှငျ မူပွောငျး လာပုံ တှရေ့မညျ။
သူ၏စိတျထဲတှငျ မိမိက ပို့လှတျပေးနသေောစိတျတနျခိုးကွောငျ့ ပူဆာဆူပှကျနခေဲ့ပွီးသော သူ၏ဒေါသစိတျမြား တဖွညျးဖွညျး ပွအေေးသှားလိမျ့မညျ။ တဈဆကျတညျးမှာပငျ မိမိအပျေါ သနားစိတျဝငျလာမညျ။ ဆကျလကျ၍ ခဈြခငျစိတျ ပွောငျးဝငျလာလိမျ့မညျ။
ခဈြခငျစိတျရောကျခဲ့လြှငျ မိမိကို မွတျနိုးဖှယျရာအဖွဈ ကွညျနူးဝမျးသာ စိတျဝငျစားခွငျး ဖွဈပျေါနတေောငျးပနျလာလိမျ့မညျ။ ထိုနောကျ သူ ပွောမှား, ဆိုမှားရှိသမြှ ဝနျခြ အကယျ၍ လူကိုယျတိုငျ လာရောကျ ဝနျခတြောငျးပနျခွငျး မပွုသျောလညျး မိမိအပျေါ ဆကျလကျ ၍ ရနျမူနခွေငျး ပွုတော့မညျမဟုတျပါ။
မီးကို ရနှေငျ့ လုံလောကျအောငျ ပကျဖနျြးထားလိုကျသကဲ့သို့ ကိစ်စပွီး အေးငွိမျးသှားလိမျ့မညျ။တဈနညျးအားဖွငျ့ ထိုသူ အခွားသို့ ရှောငျထှကျသှားပုံကို တှမွေ့ငျရလိမျ့မညျ။ ဤဖျောပွပါတို့သညျ လူ့လောက၌ တှကွေုံ့လရှေိ့ခွငျး မြားတတျသောကွောငျ့ ပွညျ့စုံအောငျ ညှနျကွားပေးရ၏
လုပျငနျးကိစ်စ တဈခုခု၌ တှကွေုံ့ရသော အဆငျမပွမှေု, နှောငျ့ယှကျမှု အကွောငျးခံသော နှောငျ့ယှကျသူကိုဖွဈစေ၊ နထေိုငျရေး၊ စားသောကျရေး စသောကိစ်စမြိုး၌ တှကွေုံ့လာရသော နှောငျ့ယှကျသူကိုဖွဈစေ ဘယျနရောမဆို တှကွေုံ့လသေမြှ ဤညှနျကွားခကျြနညျးအတိုငျးသာ လိုကျနာကငျြ့သုံးပါ၊ လုပျဆောငျပါ။
မိမိ မတ်ေတာစိတျဓာတျ ခိုငျမွဲသော တနျခိုးကွောငျ့ အံ့သွဖှယျရာ ကွညျလငျ အေးမွခွငျးအဖွဈကို တှမွေ့ငျလာရမညျ။ မတ်ေတာစိတျ လကျကိုငျထားသူသညျ နောကျဆုံး၌အောငျနိုငျမှု ရယူမညျဖွဈကွောငျး ညှနျကွားပါသညျ။
အိမျမှ စိတျကောကျပွီးထှကျသှားသူကိုလညျး ဤနညျးအတိုငျးလုပျဆောငျပါ၊ ပွနျရောကျလာပါလိမျ့မညျ။ ရဟနျး စသော သူတျောကောငျးပုဂ်ဂိုလျတို့မညျသညျမတ်ေတာတရားကို စိတျနှလုံးသား၌ အမွဲ ကိနျးအောငျးနစေရေ၏
တဈခါတဈရံ၌ လောကဓံ တဈစုံတဈခု ကွုံတှရေ့လြှငျ ငါသညျ လူယုတျမာမဟုတျ၊တရားနှငျ့ ပြျောမှေ့ နသေူတညျး၊ ဘာအကွောငျးဖွဈစေ လူ့လောကတဈခှငျကငျြလညျနရေခိုကျအခါမှာ တှကွေုံ့ရသော ပွဿနာဟူသမြှကို မတ်ေတာစကျဖွငျ့ ဖွရှေငျးသှားမညျ၊ မတ်ေတာတရားသာ လကျကိုငျထားသှားမညျဟူ၍ ခိုငျမွဲစှာ နှလုံးပိုကျထားရာ၏။
မတ်ေတာကို အဖျောပွု၍ မတ်ေတာတရား ရငျဝယျပိုကျထားလြှငျ စိတျမခမျြးသာစရာ တှကွေုံ့ရသျောလညျး စိတျခမျြးမွဖှေ့ယျရာ အမွငျမှနျရလာပါမညျ။ မကွာခငျ မတ်ေတာထားသူဘကျက သူ၏ဆန်ဒပွညျ့ဝ၍ အောငျနိုငျသူအဖွဈ ရောကျသှားရမွဲသာတညျး။
အမွတျတောငျ ထှကျသှားကွရမွဲဖွဈ၏။တရားသဘော၏ ဤသို့ ဖွဈတတျပုံကိုလညျးယုံကွညျမှု ထားနရော၏။ ခိုငျမွဲသော သဘာဝတညျး။ မတ်ေတာတရား လကျကိုငျမထားဘဲ မခံခငျြစိတျ၊သညျးမခံနိုငျစိတျ၊ ဒေါသ, မာန စသော အခွားနညျးဆိုးလကျကိုငျထားလြှငျ မှားသှားလပွေီဟူ၍သာ မှတျပါ။
ထို့ကွောငျ့ မတ်ေတာတရားကို လကျကိုငျထားခွငျးထကျ ကောငျးသောအရာ မှနျသော အလုပျ လူ့လောကတဈခှငျမှာ ဘာမှမရှိပါဘူးဟု ဤဆောငျးပါးအစပိုငျး၌ဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ မတ်ေတာတရား၏ ကောငျးကြိုးကား ဤမြှသာမကပါ၊ နိဗ်ဗာနျရောကျကွောငျးကိုပါ ကောငျးကြိုးပေး၏။
နတျဘုံ သုဂတိဘဝတို့၌သာ ကငျြလညျသှား လာနရေမညျမှာအမှနျတညျး ဤသဘောသှား ဧကနျမလှဲ ဖွဈကွောငျးကိုလညျးယုံကွညျထားရ၏။ ထို့ကွောငျ့ မတ်ေတာတရားကိုသာ စှဲစှဲမွဲမွဲ လကျကိုငျထားနကွေပါဟူ၍ တိုကျတှနျးခွငျး ဖွဈသတညျး။ စိတျထားဖွောငျ့တော့ အလုပျဖွောငျ့၏။ အလုပျဖွောငျ့တော့ အကြိုးဖွောငျ့၏။
အရာရာကို အောင်မြင်စေသော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ အရာရာကို အောင်မြင်စေသော ဂါထာ မဟာမုနိ မဟာပုညော မဟာတေဇော မဟိဒ္ဓိကော မယှံဒိပေါ မယှံနာထော မယှံဒေတု မဟာ ဇယော (၉ ခေါက်ရွတ်) စီးပွါးလာဘ်လာဘ တိုးတက် စေသောဂါထာ မဟာမုနိ မဟာပုညော မဟာတေဇော မဟိဒ္ဓိကော မယှံဒိပေါ မယှံနာထော မယှံဒေတု မဟာ လာဘော ချမ်းသာသုခ အဖြာဖြာကို ရစေသော ဂါထာ မဟာမုနိ မဟာပုညော မဟာတေဇော မဟိဒ္ဓိကော မယှံဒိပေါ မယှံနာထော မယှံဒေတု မဟာ သုခေါ။ စည်းစိမ် …
အစဉ်ရှောင်ကြဉ်ကြရမည့် ဘုန်းကံနိမ့်စေ လာဘ်ပိတ်စေသော အလေ့ဆိုးများ
အစဉ်ရှောင်ကြဉ်ကြရမည့် ဘုန်းကံနိမ့်စေ လာဘ်ပိတ်စေသော အလေ့ဆိုးများ “အစဉ်ရှောင်ကြဉ် ကြရမည့် ဘုန်းကံနိမ့်စေ လာဘ်ပိတ်စေသော အလေ့ဆိုးများ” (၁) ဘုရားခန်း တွင် လင်မယားနှစ်ယောက် မအိပ်ရ …။ (၂) ယောင်္ကျား၏ ညာဘက်တွင် မိန်းမ မအိပ်ရ …။ (၃) နံနက် ၄ခွဲမှ၆နာရီအတွင်းတွင် သာသနာစောင့်နတ် နတ်မင်းကြီးလေးပါးသည် လူအများ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှုကို ကြည့်ရှုသော အချိန်ဖြစ် သည်။ ထိုအချိန်တွင် မေထုန် မှီဝဲမှုကို အထူးရှောင်ကြဉ်ရမည် …။ (၄) မိမိအိပ်သော ခုတင်ထက် သို့မဟုတ် အိပ်ရာ ထက်မြင့်သောနေရာတွင် ထဘီတန်း မပြုလုပ်ရ။သားသမီး ခေါင်းရင်း မိဘခြေရင်းတွင်မနေရ မအိပ်ရ …။ (၅) …
အားလုံးပဲ ထီပေါက် ကံထူး နိုင်ကြပါစေ…ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်းများ…
အားလုံးပဲ ထီပေါက် ကံထူး နိုင်ကြပါစေ…ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်းများ… ထီပေါက်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများ မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ယက္ကန်းစင်တောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သိဒ္ဓိအောင် ပုတီးစိပ်နည်း (၁) သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ဗုဒ္ဓေါ မေ သတ္တပါကာရံ ၊ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ (၂) သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ ဓမ္မော မေ သတ္တပါကာရံ ၊ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ (၃) သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အရဟံ ၊ သံဃော မေ သတ္တပါကာရံ ၊သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ဂါထာ(၃)ပုဒ်လုံး ဆုံးမှ ပုတီး (၁)လုံးချ …
This Year : 147037
Total Users : 442170
Total views : 1700108